China Cotton Tote Bag Ukwenziwa kunye Factory | Ngqo
Iingxowa zokuthenga ze-Canvas ziya zisanda ngokwanda kubomi bethu beedali. Zininzi iindlela zeengxowa zelaphu, ezinje ngesimbo sehlathi, isimbo soncwadi, kunye nefashoni yomdlalo wonke.
Iingxowa zokuthenga ze-CanvasZiyanda ngokuya zisanda kubomi bethu beedali. Zininzi iindlela zeengxowa zelaphu, ezinje ngesimbo sehlathi, isimbo soncwadi, kunye nefashoni yomdlalo wonke.
Uninzi lweebhegi zelaphu ziindlela eziqhelekileyo. Imigca ethe tyaba isitayile esaziwa kakhulu ngalo lonke ixesha. Olu hlobo lwebhegi ethambileyo kunye neyesiqhelo ilungile kwilokhwe elula. Isitena esibomvu sikwangumdlalo olungileyo, kwaye imitya enemfashini ethe tyaba isisitayile esihle kakhulu sentwasahlobo, isitayile esiqhelekileyo soncwadi.
Ubungakanani be-canvas bag kufuneka bube bukhulu, kwaye kufanelekile ukubamba ikhompyuter yelaptop kunye nephepha lesayizi le-A4. Uhlobo lwesikhwama se-canvas kufuneka silula kwaye singabi nzima. Ingxowa ye-Canvas tote kufuneka kube lula ukuyiphatha, iyasebenza kwaye kulula ukuyiphatha, i-ans ikwangumbono ophambili wokuthenga isikhwama se-canvas. Imathiriyeli yengxowa ye-canvas ilula, kwaye ibhegi yelinen egxalabeni kunye nokuphatha ngesandla yeyona iluncedo.
Uhlobo lwesitayile yeyona ndlela iphambili yokubonisa isimbo semveliso, kwaye ikwabonisa ukuthengwa komthengi
Ukuphefumlelwa. Ingxowa ye-canvas enemigca ineendlela ezilula kunye nefashoni, imibala ecocekileyo kwaye entle, kwaye iye yaba yindawo yokuqala eqaqambileyo yokutsala abathengi. Uhlobo oluhle lilitye lembombo lentengiso ephumeleleyo. Xa isitayile sihambelana ngakumbi nomthengi, inkqubo yoqwalaselo kunye novavanyo lwamalaphu kunye nokusebenza kuqala nje.
Amalaphu e-Canvas ayesetyenziselwa ukwenza iintente zomkhosi kunye neparachutes kwiintsuku zokuqala ngenxa yeepropathi zabo eziqinileyo nezomeleleyo. Ngokuqhubela phambili kwesayensi kunye netekhnoloji, itekhnoloji ye-textile iphuculwe kakhulu, kwaye iintlobo ze-canvas ziye zanda kancinci kwaye isicelo siye sanda. Kwinkulungwane yama-21, singene kwixesha lokhuselo lokusingqongileyo, kwaye ngelaphu, ilaphu elinobuhlobo kwindalo, lifumene ukuqondwa ngakumbi kwaye laqhuba iikhonsepthi ezintsha zefashoni sangena kwicandelo lefashoni. Iingxowa ze-Canvas ziye zaba yinto eyaziwayo yefashoni.
Nangona kunjalo, xa abantu bethenga iibhegi zelaphu, abathengi bahlala bekungaqondani. Abanye abathengi bacinga ukuba ukujiya kwelaphu, kokulunge ngakumbi kwelaphu, kodwa akunjalo. Umgangatho welaphu awunanto yakwenza nobukhulu belaphu.
Izinto zethu zeebhegi zelaphu zenziwe ngetekhnoloji eyahlukeneyo, ke ayisiqinisi kwaye iyomelela kuphela, kodwa ikwanobuthathaka ngakumbi, ukuthamba nokuphefumla. Ukukhanya kwelaphu kukwehlisa ubunzima bengxowa yokuqala ye-canvas enzima.
Ubukhulu obukhulu, ubungakanani obuqhelekileyo okanye iSiko
Egqithileyo Ingxowa yeTayile yeTeyile
Okulandelayo: Non womluki kupholile Lunch Bag
Anvas Tote Bag Cotton
ote Ingxowa yeCotton
ote Ingxowa yeCotton Canvas
ote Ingxowa yeCotton Organic
Ingxowa yeTote Canvas Tote
ibhegi yeCotton Tote